Ethernet Media Converter Vagadziri & Vatengesi | China Ethernet Media Shanduri Fekitori
1000Mbps Ethernet RJ45 kuSFP Media Converter inoshandura 100BASE-FX fiber ku100Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 1000Mbps Ethernet RJ45 kune SFP Media Converter • Hafu o ...
100Mbps SFP Media Shanduri ZJ-1100SFP
100Mbps Ethernet RJ45 kuSFP Media Converter inoshandura 100BASE-FX fiber ku100Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 100Mbps Ethernet RJ45 kune SFP Media Converter • Hafu kana ...
100Mbps Imwe Fiber Midhiya Shanduri ZJ-3100AB
10 / 100M Fiber Media Converter inoshandura 100BASE-FX fiber ku100Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Imwe Mode Imwe Fibre • Hafu kana ful ...
10 / 100M Fiber Media Converter inoshandura 100BASE-FX fiber ku100Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana izere ...
2 Ports Ethernet kune Fiber Media Shanduri ZJ-100102-25
10 / 100M Fiber Media Converter inoshandura 100BASE-FX fiber ku100Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Rondedzero • 10 / 100M 2 Port Ethernet kune Fiber Media Converter • Hafu kana yakazara d ...
1000Mbps Imwe Fibhi Media Shanduri ZJ-GS03A / B
10/100 / 1000M Fiber Media Converter inoshandura 1000BASE-FX fiber ku1000Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 10/100 / 1000M Media Converter, Imwe Mode Imwe Fibre • Hafu o ...
10/100 / 1000M Fiber Media Converter inoshandura 1000BASE-FX fiber ku1000Base-TX mhangura midhiya kana zvinopesana. Ipa mhinduro iri nyore uye ine hupfumi kusimudzira mhangura yakavakirwa network kune fiber optic yekuwedzera kusvika kwechiratidzo. Media Converter kutapurirana kure kusvika 120KM. Plug-uye-kutamba dhizaini, nyore kuisa. Inogona kushandiswa sekumira-yega, kana kuiswa mu2U 14 slot media converter chassis ine centralized magetsi. Zvimiro • 10/100 / 1000M Media Converter, Imwe Mode Dual Fibre • Hafu kana ...
2U 16 Slots Rack Gomo Chassis
2U 16 Chassis Chassis inogona kugadzirisa musanganiswa unosvika gumi nezvitanhatu zvidimbu zvemavhidhiyo module uye vhidhiyo / data ma module. AC110 / 220V Shandura Modhi Simba Rinopa (SMPS) dhizaini inoshandiswa kugadzira module ichishanda yakazvimiririra inogoneka pasina kupindira kubva kune imwechete simba kudzima uye mamwe ma module 'kutadza mukati mechassis. Kuvimbika kwakasimba uye kugadzikana kweimwe module kunoitika. Zvimiro • 2U 16 Slots Chassis yeMedia Converter • Kugamuchira Dual Power Supply, zvaizosimudzira kuvimbika kweiyo ...
2U 14 Slots Rack Gomo Chassis
2U 14 Slots chassis inogona kutora 14 seti ye10 / 100M kana 10/100 / 1000M yakamira-yega midhiya vashanduri. AC110 / 220V Shandura Modhi Simba Rinopa (SMPS) dhizaini inoshandiswa kugadzira module ichishanda yakazvimiririra inogoneka pasina kupindira kubva kune imwechete simba kudzima uye mamwe ma module 'kutadza mukati mechassis. Kuvimbika kwakasimba uye kugadzikana kweimwe module kunoitika. Zvimiro • 2U 14 Slots Chassis yeMedia Converter • Kugamuchira Dual Power Supply, yaigona kusimudzira kuvimbika kweRack • Sup ...